ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ | Page 15 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
22.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ သွားနေရလား? ခေါင်းဖီးတိုင်း စိတ်ပျက်မိနေလား? အစားအသောက်ကိုသာ ကောင်းကောင်းစားပါ။ ဦးရေပြားလေး ကျန်းမ...
21.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကျန်းမာတဲ့အသည်းက စွမ်းအင်တွေကိုတိုးတက်စေပြီး ကြည်လင်တဲ့အသားအရည်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ရင် အသ...
မိုးရာသီဆိုတာက တုပ်ကွေးရာသီဖြစ်ပြီးတော့ တုပ်ကွေးတွေကလည်း နေရာအနှံ့ပဲ ဖြစ်နေကြပါပြီ။ တုပ်ကွေးဆိုတာကလည်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့် ကူးပြ...
20.7.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
သွေးတွင်းဆီးချို ပုံမှန်ထက်တက်နေတာဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ တစ်ကိုယ်လုံးကိုပြဿနာကြီးကြီးမားမား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရှိရင် ဆီးချိူကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းခ...
သက်သတ်လွတ်စားတဲ့သက်တမ်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှု တွေရှိလာပါတယ်။ ဗီတာမင် ပြည့်ဝကျန်းမာနေမှ ကောင်းမွန်တဲ့ကျန...